तपाईंलाई थाहा छ ? फेसबुकबाटै पैसा कमाउन सकिन्छ नि ! कमाउन थाल्ने हो भने यसो गर्नुस् – Janadesh Daily | ePaper
तपाईंलाई थाहा छ ? फेसबुकबाटै पैसा कमाउन सकिन्छ नि ! कमाउन थाल्ने हो भने यसो गर्नुस्
October 10, 2021 October 10, 2021 by Jandesh Daily
जनादेश आइटी अपडेट ।
तपाईं हामी सबैले फेसबुक चलाउँछौं । फेसबुक विश्वमा सबैभन्दा बढी रूचाइएको सोसल साइट हो । नेपालमा पनि फेसबुक नचलाउने सायदै होलान् ।
तर धेरै मानिसलाई फेसबुकबाट पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी भने नहुँन सक्छ । आज हामी तपाईलाईं यस आर्टिकलमार्फत फेसबुक पेजबाट कसरी आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिदैंछौं । फेसबुकमार्फत कसरी पैसा कमाइन्छ भन्ने सबैलाई जानकारी हुँदैन। प्राय यसका प्रयोगकर्ताहरूले दिनमा एक पटक फेसबुक खोलेकै हुन्छन् । त्यसैले आफ्नो व्यापार व्यवसाय र उत्पादनको बारेमा विश्वलाई जानकारी दिन फेसबुक सजिलो माध्यम बनेको छ ।
तपाईँ फेसबुकको अडियन्स नेटवर्कमा सहभागी भई काम गर्नुहुन्छ भने सिधै फेसबुकले नै यसका विज्ञापनदाताबाट आएको पैसाको केही प्रतिशत पैसा दिन्छ। यहाँ तपाईंलाई कसरी यसबाट पैसाकमाउने बारेमा जानकारी दिइएको छ ।
चरणवद्ध रूपमा यी काम गर्नुस्ः
याद राख्नुहोस तपाईंको साइटमा एक महिनामा १५ हजार भन्दा माथि फेसबुकबाट ट्राफिक गएको हुनुपर्दछ अन्यथा फेसबुकले तपाईंको साइडलाई मिनिमल रिडरसिपमा राख्नेछ। यसरी तपाईंले सामान्य तरिकाले घरबाटै केही मेहनत गरेर फेसबुकबाट आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ । यसका लागि फेसबुकले तोकेका सबै नियम पालना भने गर्नैपर्ने हुन्छ ।
Posted in मुख्य समाचार, सामाजिक सञ्जाल, सुचना प्रविधि